iPad - iPhone သတင်းများ အိုင်ဖုန်းသတင်း
El အိုင်ပက် တက်ဘလက်လား တက်ဘလက် Apple ကတီထွင်ခဲ့ပြီး Mac နဲ့ iPhone ကြားကကြားခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ တစ်ခုရှိ ၁၃.၃ လက်မ Multi-touch မျက်နှာပြင် ထို့အပြင်ဒေတာဆက်သွယ်မှုရှိသည့်မော်ဒယ်များသို့မဟုတ် WiFi နှင့်သာမော်ဒယ်များရှိပြီးအိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည် operating system ကို iPhone နှင့်အတူမျှဝေသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများသည်၎င်းကိုပိုမိုကြီးမားသောဖန်သားပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် application store ရှိပြီး iPhone ရှိ application အားလုံးကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤတွင်သင်၌၎င်း၏သတင်းများစွာကိုတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်သတင်းအားလုံးကိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အစ်မဘလော့ဂ်ထဲသို့ဝင် အိုင်ပက်ဒ်သတင်း.
ဤအယူအဆသည် iPadOS တွင် မိုးလေဝသအက်ပ်၏ပုံစံကို ပြသသည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
iPadOS သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က iPad အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် operating system အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်အထိ iOS က လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်...
TV ပေါ်မှာ iPad ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
အကြောင်းအရာကိုခံစားဖို့ တီဗီမှာ iPad ကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကို တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး စဉ်းစားဖူးတာ သေချာပါတယ်...
iPad Pro ၏ နောက်မျိုးဆက်သည် M2 ချစ်ပ်ကို သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဆောင်းဦးတွင် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
Apple ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက ကျင်းပခဲ့တဲ့ iPad Pro ကို ဘေးဖယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ March ဟာ အမြဲတမ်း...
စမ်းသပ်ချက်များအရ iPad Air အသစ်သည် iPad Pro နှင့် အလားတူစွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
iPad Air အသစ်ကို တပ်ဆင်ပေးသည့် M1 ပရိုဆက်ဆာသည် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါးမှုကို ပေးစွမ်းရန် လမ်းကြောင်းလွဲနေသူများဟု အချို့က ယူဆကြသည်။
သင်သည် iPad ကို USB-C ဖြင့် Studio Display သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သော်လည်း အချို့သော မော်ဒယ်များကိုသာ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
por Tony Cortes လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
မနေ့ကနေ့လည်ပိုင်းက Apple ပွဲရဲ့ ထူးခြားဆန်းသစ်မှုကတော့ Mac Studio နဲ့ သူ့ရဲ့...
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့် သားရဲအသစ်ဖြစ်သော iPad Air
por Louis padilla လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
Apple သည် iPad Air ကို သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီး မျှော်လင့်ထားသည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ အစွမ်းထက်ဆုံး ပရိုဆက်ဆာ ပေါင်းစပ်မှု...
iPad Air အသစ်တွင် iPad Pro မှ M1 ပရိုဆက်ဆာပါရှိသည်။
Apple မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ 24 နာရီထက်မနည်း ဝေးကွာနေပြီး ဆိုလိုတာက ကောလဟာလတွေ...
တက္ကသိုလ်အတွက်အကောင်းဆုံး iPad ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
ဒါက ကျွန်တော်တို့ ခဏခဏလုပ်ရမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖြေရဖို့ တော်တော်ရှုပ်ထွေးပါတယ်...
2026 ခုနှစ်အတွက် ခေါက်မျက်နှာပြင်ပါသည့် MacBook နှင့် iPad တို့၏ ပေါင်းစပ်
ခေါက်ချိုးမျက်နှာပြင်များသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများထက် ပိုမိုအသုံးပြုကြပြီး Apple က လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။...
ချစ်ပ်များပြတ်လပ်နေသော်လည်း iPad သည် တက်ဘလက်များ၏ဘုရင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
iPad သည် Apple ၏ အထင်ကရ ကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ iPhone မှာ ပြိုင်ဖက်များစွာရှိပြီး...
iPad Pro အတွက် Satechi Stand နှင့် Hub၊ stand နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားလုံး
သင်၏ iPad ကို desktop မုဒ်တွင် အသုံးပြုခြင်းသည် follower ပိုများလာကာ လက်တွေ့ဘဝဖြစ်ပြီး Satechi က ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်သည်...
iPad Pro တွင် Apple Pencil ဖြင့်ဆွဲရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ
အဘယ်ကြောင့် iPad တွင်ဂဏန်းတွက်စက်မရှိပါ။
Apple မှာရှိတဲ့ iPhone နဲ့ iPad မျက်နှာပြင်ကိုပြန်ပြင်ဖို့ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
Apple Pencil ရဲ့ဘက်ထရီကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ
iPad မှ iCloud အကောင့်ကိုဖျက်နည်း
iCloud မှဖိုင်များနှင့်ဒေတာများကို Free Up Space သို့ဖျက်နည်း
Home နှင့် Power ခလုတ်များမပါဘဲဖန်သားပြင်များကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း
သငျသညျအပင်များနှင့်ဖုတ်ကောင် 10 အဆင့်ဆင့်ကျော်လွှားရန်လိုအပ်သင်လှည့်ကွက် 2
သင်ခန်းစာ (Mac) - "iTunes Library.itl ဖတ်။ မရပါ ... " အမှားကိုပြင်ပါ